" Live saleလောကထဲ အတူတူလက်တွဲခေါ်ယူခဲ့တဲ့ နှိုင်းယှဥ်မြင့်မိုရ်အတွက် ပိုက်ဆံပန်းစည်းနဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေ ပို့ပေးခဲ့တဲ့ညီနန္ဒ'' - Cele Gabar
” Live saleလောကထဲ အတူတူလက်တွဲခေါ်ယူခဲ့တဲ့ နှိုင်းယှဥ်မြင့်မိုရ်အတွက် ပိုက်ဆံပန်းစည်းနဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေ ပို့ပေးခဲ့တဲ့ညီနန္ဒ”
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေညီနန္ဒကတော့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်မင်းသားတစ်လက်ပါပရိသတ်ကြီးရေ ။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာအောင်အနူပညာလောကထဲ ဖြတ်သန်းကျင်လည်ပြီး အခု​ဆိုရင် ဇာတ်လမ်း​တွဲတွေမှာ မိဘနေရာကနေပါဝင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့Live saleဘုရင်မ နှိုင်းယှဥ်မြင့်မိုရ်နဲ့အတူတူတွဲဖက်ကာ Live sale လေးတွေပြုလုပ်လျက်ရှိတာပါ။ဒါ့အပြင် Live saleလောကထဲ
အတူတူလက်တွဲခေါ်ယူခဲ့တဲ့ နှိုင်းယှဥ်မြင့်မိုရ်အတွက် ပိုက်ဆံပန်းစည်းနဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေပေးခဲ့တာပါ။
“ဒါတွေတကယ်မလိုပါဘူး အကိုရယ်အကိုအောင်မြင်တာ အလုပ်တွေ ရနေတာပဲနှိုင်းရှင်ဝမ်းသာနေပါပြီ…. ပီတိစားအားရှိပါတယ်….ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော့်ညမလေးက ကျွနိတော့်ကိုဆွဲခေါ်ခဲ့တာ ကူညီခဲ့တာ အလုပ်တွေချိတ်ပေးတာဆိုပြီး အမြဲပြောလေ့ရှိတယ်အကို့ရင်ထဲအမြဲရှိနေရင် ရပါပြီ…အကို နန်ထော ဒီ့ထက်မက အောင်မြင်မှာပါ👍”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့နှိုင်းယှဥ်ကတင်လာခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ်တွေထဲမှာရောညီနန္ရဲ့ပရိသတ်တွေရှိရင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
Source- Nyi Nanda
” Live saleေလာကထဲ အတူတူလက္တြဲေခၚယူခဲ့တဲ့ ႏႈိင္းယွဥ္ျမင့္မိုရ္အတြက္ ပိုက္ဆံပန္းစည္းနဲ႔ လက္ေဆာင္ေလးေတြ ပို႔ေပးခဲ့တဲ့ညီနႏၵ”
CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရညီနႏၵကေတာ့ ဝါရင့္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသားတစ္လက္ပါပရိသတ္ႀကီးေရ ။ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာေအာင္အႏူပညာေလာကထဲ ျဖတ္သန္းက်င္လည္ၿပီး အခု​ဆိုရင္ ဇာတ္လမ္း​တြဲေတြမွာ မိဘေနရာကေနပါဝင္ေနၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိမွာေတာ့Live saleဘုရင္မ ႏႈိင္းယွဥ္ျမင့္မိုရ္နဲ႔အတူတူတြဲဖက္ကာ Live sale ေလးေတြျပဳလုပ္လ်က္ရွိတာပါ။ဒါ့အျပင္ Live saleေလာကထဲ အတူတူလက္တြဲေခၚယူခဲ့တဲ့ ႏႈိင္းယွဥ္ျမင့္မိုရ္အတြက္ ပိုက္ဆံပန္းစည္းနဲ႔ လက္ေဆာင္ေလးေတြေပးခဲ့တာပါ။
“ဒါေတြတကယ္မလိုပါဘူး အကိုရယ္အကိုေအာင္ျမင္တာ အလုပ္ေတြ ရေနတာပဲ ႏႈိင္းရွင္ဝမ္းသာေနပါၿပီ…. ပီတိစားအားရွိပါတယ္….ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ့္ညမေလးက ကြၽနိေတာ့္ကိုဆြဲေခၚခဲ့တာ ကူညီခဲ့တာ အလုပ္ေတြခ်ိတ္ေပးတာဆိုၿပီး အၿမဲေျပာေလ့ရွိတယ္အကို႔ရင္ထဲအၿမဲရွိေနရင္ ရပါၿပီ…
အကို နန္ေထာ ဒီ့ထက္မက ေအာင္ျမင္မွာပါ👍”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ကတင္လာခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ္ေတြထဲမွာေရာညီနႏၵရဲ႕ပရိသတ္ေတြရွိရင္မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။
Previous post (၃)ရက်သားအရွယ် စွန့်ပစ်သမီးငယ်လေးတစ်ဦးကို ထပ်မံမွေးစားစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
Next post မွေးနေ့အလှူအနေနဲ့ ပဲခူးမြို့ မဟာစေတီ ကံကျောင်းမှာ ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သူရလင်း